Vaovao - Fankatoavan'ny UL - Nandalo ny fanamarinana UL ny BlackShields DC Powered Air conditioner
BlackShields dia faly manambara fa modely 2 an'ny kabinetran'ny kabinetran'ny rivotra DC izay namboarina ho an'ny mpanjifa amerikana nandalo ny fankatoavana UL. Taorian'ny fitsapana sy fisafoana be dia be, ny Underwriters Laboratories dia nanao sonia ny fankatoavan'ny UL ho an'ny modely 2 an'ny rivotra DC.
Reharehanay fa ny Air Conditioner DC dia misy fitaovana fanaraha-maso ao anatin'izany ny controller, ny mpamily DC Compressor ary ny fiarovana ny tselatra izay R&D avy amin'ny BlackShields. Midika izany fa ny BlackShields dia afaka manome rivotra DC hafa miaraka amin'ny fankatoavana UL amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
BlackShields dia mamokatra DC cabinet Air conditioner izay be mpampiasa amin'ny tranokala Telecom tsy misy herinaratra na mampiasa famatsiana herinaratra hybrid.
Ny condtioner DC dia manana compressor True DC powered (tsy misy inverter) sy mpankafy DC izay afaka manitsy ny hafainganam-pandeha mifototra amin'ny fangatahana mangatsiaka ao amin'ny kabinetra. Ny famatsiana herinaratra amin'ny kabinetran'ny rivotra DC dia -48V izay afaka mandeha mivantana amin'ny bateria ao amin'ny tranokala. Ny compressor DC dia afaka manomboka moramora mba hisorohana ny firongatry ny rivo-doza manimba ny mpamokatra.
Ny BlackShields dia manome vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herinaratra DC (fahaizana mampangatsiatsiaka manomboka amin'ny 300W ka hatramin'ny 4000W) ho an'ny fampiharana samihafa.
Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.